ရှယ်ပြုစုပါ့မယ်ဗျ – My Blog
“နင့်ဟာကြီးကလည်း ကြည့်ပါဦး တောင်နေတာမာပြီးရှည်တယ်” ပန်းခြံထဲ၌ပုံ့ပုံကမြင့်အောင်၏ လီးတံကြီးကိုဆော့ကစားရင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့နှင့်မြင့်အောင်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးမတ်ဆင်ဂျာ၌ ပုံ့ပုံ့တောင်းဆိုလို့ဖြစ်စေ မြင့်အောင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ အောကားတွေ အောအကြောင်းတွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုရလောက်အောင်ခင်မင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်ရှိမယားဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်မှာ လူလွတ်ဖြစ်သည်။နှစ်ယောက်လုံး၃၂ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်ကလပိုင်းငယ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားမရတိုင်းမြင့်အောင်ကိုအကြံတောင်းကြည့်ရင်းမြင့်အောင်လည်းသူသိသောဆေးဝါးတွေအပြုအစုတွေပြောပြတတ်၏။နောက်ဆုံးအဆင်မပြေမှသူကြည့်ဖူးသောဖူးကားတွေထဲကလိုသဘောတရားတွေပြောပြပေးလိုက်သည်။ “နင့်ယောကျာ်းကိုစည်းရုံးတာအဆင်ပြေသွားပြီလား” “အင်းပြေလို့ ခုလိုနင်နဲ့လာတွေ့တာပေါ့” “တော်တော်စည်းရုံးလိုက်ရမှာပေါ့” “မဟုတ်ပါဘူး။
သူက ပန်းညိုးနေတာကော လုပ်တိုင်းလည်းငါကကောင်းကောင်းမခံစားရသေးခင်သူပြီးနေပြီဖြစ်နေတာကော ကိုနင်ပြောသလိုပြောကြည့်တာပေါ့ ဆန္ဒမပြည့်တာကြာလာရင် ငါလည်းသူကပ်တာခံချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး သူမသိအောင်လည်းလုပ်ချင်လုပ်မိမှာ အဲ့တော့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြ တစ်ခါတစ်လေ ဆန္ဒအရ သူစိမ်းယောကျာ်းနဲ့ဆက်ဆံမိပေမယ့်သူ့အပေါ်မှာအချစ်လျော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း သူလည်းဆန္ဒအရခရီးသွားရင်းတခြားကောင်တွေနဲ့ပလူးမိတာကိုလည်းငါကနားလည်ပေးတဲ့အကြောင်း ညှိယူရတာပေါ့” “အင်း…သူကောဘာပြန်ပြောလဲ” “သူ့ကြောင့်ငါဆန္ဒမပြည့်တာတွေကိုနားလည်ပေးပါတယ်တဲ့။သူ့အပေါ်အချစ်မလျော့ရင်လည်းကျေနပ်ပါတယ်တဲ့။သူ့နောက်ကွယ်မှာမဖောက်ပြန်ပဲခုလိုသူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသဘောထားတောင်းခံတာကျေနပ်ပါတယ်တဲ့။တစ်ခါတစ်လေမိန်းမဆန္ဒရှိလို့စိတ်ချရသူဆိုကိုယ်ခွင့်ပြုပါတယ်တဲ့”။
“အင်း နင့်ယောကျာ်းကသဘောထားကြီးပြီးနင့်ကိုအရမ်းချစ်လို့ခုလိုနားလည်ပေးနိုင်တာနေမယ်” “အင်း…ဟုတ်မယ်….အယ်…ကြည့်ပါဦးနင့်ဟာကြီးက ပိုမာလာပြီးအရည်ကြည်တောင်ထွက်နေပြီ” “နင့်လက်လေးတွေကနူးညံပြီးပွတ်သပ်နေတာအရမ်းခံလို့ကောင်းတာကိုး…။နင့်နို့ကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးပဲ နင့်ယောကျာ်း အပီကိုနယ်ဖတ်ထားမှာပဲ” “အင်း” “နင့်နို့ကြီးတွေငါကိုင်ကြည့်မယ်နော်” “ကိုင်လေ” ပုံ့ပုံ့လည်းရင်ဖုံးကြယ်သီးလေးတွေဖြုတ်ပေးလိုက်သောအခါ ဘရာစီယာအောက်၌မို့မောက်ဖုထစ်နေသောနို့အုံကြီးကိုမြင့်အောင်ကအငမ်းမရငုံ့ကြည့်ပြီးသူ့လက်ဝါးကြီးဖြင့်အုပ်ကိုင်ကာဖွဖွလေးဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ချေလိုက်သည်။ “အား….ငါ့စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲမြင့်အောင်ရယ်…” “ဖီလင်တက်လာပြီလား” “အင်း” မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့၏ပါးလေးကိုရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်ပြီးပုံ့ပုံ့၏ခေါင်းကိုသူ့ဖက်အသာအယာဆွဲလှည့်လိုက်သည်။
ပုံ့ပုံ့လည်းအလိုက်သင့်လှည့်ပေးပြီးမျက်လုံးလေးပိတ်ထားလိုက်သည်။မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့အိအိစက်နူးညံသောနှုတ်ခမ်းလေးပေါ်အကြင်နာအနမ်းလေးတွေတပြွတ်ပြွတ်ပေးရင်းနို့အုံကြီးကိုဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ပုံ့ပုံ့လည်းအလိုက်တသိပင် မြင့်အောင်၏လီးတံကြီးကိုပွတ်သပ်ဆော့ကစားရင်းဂွင်းထုပေးလေသည်။ “အု..အူး…ကောင်းလိုက်တာပုံ့ပုံ့ရာ…ငါမနေနိုင်တော့ဘူး ဒီနားကဟော်တယ်တခုခုသွားရအောင်” “အင်း..သွားလေ” ဟော်တယ်ခန်းထဲရောက်သောအခါ…. “နင်ခနစောင့်ဦး..ငါအိုက်လို့ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်” ဟပုံ့ပုံ့ကပြောပြီးအဝတ်အစားလဲကာရေချိုးတဘက်လေးဖြင့်ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။မြင့်အောင်လည်းရေခဲသေတ္တာထဲမှဘီယာတစ်ဗူးထုတ်သောက်ရင်းဖုန်းထဲမှာအောကားကြည့်ရင်းစောင့်နေလိုက်သည်။ပုံ့ပုံ့သည်ရေချိုးရင်းမြင့်အောင်၏အလိုးခံရပုံကိုမြင်ယောင်စိတ်ကူးယဉ်ရင်းနို့အုံကြီးတွေစောက်မွှေးရေးရေးသာရှိသောစောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကိုဆပ်ပြာဖြင့်သေချာဆေးကြောသန့်စင်နေလေသည်။
ရေချိုးခြင်းပြီးလို့အခန်းအပြင်ထွက်လာသောအခါမွေ့ယာပေါ်၌အတွင်းခံတစ်ခုလေးသာရှိတော့သောမြင့်အောင်သည်တအီးအီးတအားအားအသံမြည်နေသောအောကားကိုကြည့်ရင်းသူ့လိင်တံကိုဘစ်ပေါ်မှပွတ်သပ်ပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရ၍ရင်ခုန်သံပိုဆူပွက်လာသည်။မြင့်အောင်လည်းရေချိုးခန်းမှထွက်လာသောပုံ့ပုံ့ကိုမြင်သောအခါ ကြည့်လက်စအောကားကိုပိတ်၍မွေ့ယာပေါ်မှထာကာပုံ့ပုံ့ရှေ့မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ထို့နောက်ပုံ့ပုံ့ကိုအသာအယာပွေ့ဖက်ကာအနမ်းမိုးတွေရွာလိုက်ရင်းလက်နှစ်ဖက်ကလည်းပုံ့ပုံ့တင်ပဆုံကိုဖက်ထားရာမှဖင်လုံးအိအိကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။ “ဒီဖင်လုံးကြီးကိုငါအလုပ်ထဲမှာခိုးခိုးကြည့်ပြီးစိတ်ကူးတွေယဉ်နေခဲ့ရတာ….”သိသားပဲ တစ်ခါတစ်လေ လစာထုတ်လို့လူအုံနေချိန်မျိုးဆိုနင်ငါ့ဖင်ကိုမသိမသာလာပွတ်နေတာငါသိတယ်….နင့်ကိုအသားယူသလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆောရီးပါဟာ။
ဒါပေမယ့်ကိုင်ခြင်းလွန်းထဲငါ့စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်လို့ကြံမိတာပါ “နင့်စိတ်ထားကိုငါသိပါတယ်ဟာ…ဒါမယ့် ငါ့ဆန္ဒအရ ခုလိုဆုံတွေ့ရတာကလွဲရင် နင်ငါ့အပေါ်မျှောလင့်ချက်တွေမထားပါနဲ့နော် နင်ခံစားရမှာစိုးလို့” “ရပါတယ် ဟာ… နင့်အတွက်ဆို အသုံးချခံအဖြစ်နဲ့လည်းငါရောင့်ရဲနိုင်ပါတယ်…” “မြင့်အောင်ရယ်……” မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့၏တဘက်ကိုချွတ်ချလိုက်ကာမွေ့ယာပေါ်သို့ပုံ့ပုံ့ကိုအသာအယာလှဲလျောင်းပေးလိုက်သည်။မိမွေးတိုင်းပုံ့ပုံ့အလှကိုရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်ပြီးပုံ့ပုံ့၏လည်တိုင်လေးကိုကစ်ဖွဖွလေးပေးလိုက်သည်။ထိုမှတစ်ဖန် လည်တိုင်မှတစ်ဆင့်ရင်ညွှန့် ရင်ညွှန့်မှတစ်ဆင့် မို့မောက်ဆူတင်းနေသောနို့အုံကြီး၏နို့သီးခေါင်းအိအိလေးကိုစုပ်ငုံ၍လျှာလေးနှင့်မွှေ့ကာကစားပေးလိုက်သည်..။ “အ….အင်း……..မြင့်အောင်ရယ်…”ဟုညည်းရင်းပုံ့ပုံ့လည်းမျက်လုံးလေးစုံမှိတ်ကာ ကာမခရီးအစကိုရင်တဖိုဖိုဖြင့်အရသာခံနေလေတော့သည်။
နို့အုံကြီးကိုဆုပ်နယ်လိုက်၊နို့သီးလေးတွေစို့ယက်ကစားလိုက်ရင်းမြင့်အောင်၏ခေါင်းသည်ပုံ့ပုံ့ဝမ်းဗိုက်နားမှနိမ့်ဆင်းသွားပြီးအမွှေးပါးပါးဖြင့်ဆူဖြိုးမို့ဖောင်းနေသောစောက်ဖုတ်အုံကြီးကိုနမ်းရှုံ့ပြန်လေသည်။စောက်ဖုတ်အစိလေးကိုလျှာလေးနဲ့သပ်ယူဆွဲစုပ်လိုက်သောအခါပုံ့ပုံ့မှာ ခြေဖျားလေးများကော့လျက် ညည်းသံသဲ့သဲ့လေးပျံ့လွင့်လာသည်။စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတစ်ဝိုက်နှင့်စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုမြင့်အောင်ကတရှိုက်မက်မက်ယက်ပေးလိုက်သောအခါ “အူး….လုပ်တတ်လိုက်တာမြင့်အောင်ရယ်…ယက်..ယက်…တအားကောင်းတာပဲ…”‘ ဟုပြော၍မြင့်အောင်း၏ခေါင်းကိုဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ဖိထားပေးလိုက်သည်။မြင့်အောင်လည်းအထူးပင်ပြုစုချင်နေသဖြင့်ပုံ့ပုံ့၏စောက်ဖုတ်ကြီးကိုအနုအရွတစ်ဖုံအနုကြမ်းတစ်ဖုံဖြင့် လျှာဖျား လျှာပြားတင်မက စောက်စိကိုပါမက်မက်မောမော စုပ်ခြင်း ယက်ခြင်းဖြင့်ပြုစုပေးလိုက်သည်။
ယက်ရတာဝမှစောက်ဖုတ်နားကခေါင်းခွာရင်း “ငါ ယက်ပေးတာကောင်းလား” “ကောင်းလိုက်တာဟယ်….ငါ့ယောကျာ်းတောင်အဲ့လောက်အကြာကြီးမလုပ်ပေးဖူးဘူး” “ငါ့ကို လည်းပြန်ပြုစုပေးနော်” “ဘယ်လိုပြုစုရမှာလဲ” “ငါ့လီးကြီးကိုနင့်ယောကျာ်းထက်သာအောင်မှုတ်ပေးလေ” “အင်း နင်ပက်လက်လှန်လိုက်လေ” မြင့်အောင်ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်သောအခါပုံ့ပုံ့သည်မြင့်အောင်၏၇လက်မပတ်လည်ခပ်တုတ်တုတ်လီးတံကြီးကိုလက်ဖြင့်ဖွဖွလေးဂွင်းထုပေးရင်းဒစ်ထိပ်ကိုငုံ၍လျှာနှင့်ဆော့ကစားလိုက်သ်။ပြီးနောက် ရေငတ်စဉ်ရေခဲချောင်းတွေ့ရလိုတပြွတ်ပြွတ် စုပ်ယက်ကာ ဘောအိတ်ကြီးကိုလည်း တပြတ်ပြတ်ယက်ပေးသည်။ မြင့်အောင်လည်း တအူးအူး…တရှီးရှီး..ဖြင့် ပုံ့ပုံ့၏အပူငွေ့နွေးသောအာခံတွင်းဖြင့်ဘလိုးဂျော့ပေးဖြင့်အရသာကိုမိန်းမူးခံစားလေသည်။ “အား….ရပြီ…နင်ပက်လက်ပြန်လိုက်လိုက်တော့ ငါ့လီးတံကြီးက နင့်စောက်ဖုတ်ထဲခိုဝင်မှေးစက်ချင်နေပြီ”။
ပက်လကိပြန်ဖြစ်သွားသောပုံ့ပုံ့၏ပေါင်နှစ်ခြောင်းကိုအသာဟလျက်မြင်အောင်သည်သူ၏တင်းမာနေသောလီးတံဒစ်ထိပ်ဖြင့်ပုံ့ပုံ့၏စောက်စိလေးကိုဖိကပ်ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ပုံပုံ့လည်းခေါင်းအုံ့စကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်လျက်မြင့်အောင်၏လီးတံကြီးအဝင်ကိုငံ့လင့်နေပြီဖြစ်သည်။မြင့်အောင်လည်းစောက်ခေါင်းဝကိုလီးတံတေ့၍အသာအယာဖိသွင်းရင်းပုံ့ပုံ့ပေါ်ကိုယ်ချင်းအပ်လိုက်သည်။ “အိုး…နင့်စောက်ဖုတ်လေးကနွေးအိနေတာပဲပုံ့ပုံ့ရယ်..။နင့်ယောကျာ်းပြီးလည်းပြီးလောက်ချင်စရာကိုး” “လိုးပါ မြင့်အောင်ရယ်…..ငါ့အရမ်းလိုနေပြီ” “အင်း..နငိကျေနပ်လောက်အောင်ကိုငါလိုးပေးမယ်” မြင့်အောင်လည်းခပ်မှန်းမှန်အထုတိအသွင်းလုပ်နေရာမှခပ်ဆတ်ဆတ်ပုံစံမျိုးဖြင့်လီးတံကြီးကိုစောက်ဖုတ်နှင့်ပနာသင့်စေရန်ပြုလုပ်နေသည်။ယခုပုံ့ပုံ့မှာအရမ်းတောင့်တနေပြီမို့ခပ်မြန်မြန်လေးလိုးပေးရင်းလီးအဆုံးထိဝင်ရန်အားဖိပေးလိုက်သည်။
အား…ထိတယ်…..ထိတယ်…ကောင်းလိုက်တာ မြင့်အောင်ရယ်…လိုး….လိုး…နင့်အကြိုက်လိုး “လိုးမှာ….အလုပ်ထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတာ အခုတစ်ကယ်ကြုံရတော့အပီကိုလိုးမှာ…..ကောင်းလား..ဟင်..အင့်…အင့်…ကောင်းလား…အင့်” “အား..ကောင်းတယ်….အား….မြင့်အောင်..အား..ကောင်းတယ်….” မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့၏ခြေနှစ်ချောင်းကိုသူ့ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်၍ပုံ့ပုံ့၏စောက်ဖုတ်ကြိးကိုသူ့လီးဖြငိ့တဖန်းဖန်းမြည်အောင်ကိုဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့သည်။ဆောင့်ဆောင့်လိုးလေပုံ့ပုံ့နို့ကြီးလှုပ်ရမ်းလေ မို့မြင့်အောင်ကိုစိတ်ဆွပေးသလိုပင်ဖြစ်နေချေတော့သည်။ “အင့်….အင့်…အ….ဒီအတိုင်းကနည်းနည်းကြာသွားပြီ နင်လေးဘက်ပြောင်းကုန်းလိုက်” “အင်း” လေးဘက်ကုန်းလိုက်သောပုံ့ပုံ့၏ဖင်လုံးကြီးကြားမှစောက်ဖုတ်ပြူးပြူးကြီးမှာမြင့်အောင်၏အကြိုက်ပင်ဖြစ်နေချေတော့ရာ ဖင်လုံးကြီးကိုအသာအယာဖြဲ စောက်ဖုတ်ဝလီးတံတေ့ပြီး အသာပင်ဖိသွင်းလိုက်တော့သည်။
အူး…..ကောင်းလိုက်တာမြင့်အောင်ရယ်….အထဲထိထိနေတာကိုခံစားရတယ် “ငါ ကောပဲပုံ့ပုံ့ရေ…စောက်ဖုတ်စီးပိုင်ပိုင်ကြီးကငါ့လီးကိုညှစ်ဆွဲနေသလိုပဲ၊ငါနည်းနည်းကြမ်းမယ်နော်” “ရတယ်…ကြမ်း…ငါခံနိုင်တယ်…” “လိုးပြီ….အမြဲတမ်းတခဲ့ရတဲ့ဒီဖင်ကြီးလှုပ်ရမ်းနေတာကိုအရသာခံပြီအပီကိုလိုးပြီ” “အ…အ…အ…အ..အား…မြင့်အောင်ရယ်…အူး…အ..အ…အူး…” မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့၏တင်လုံးကြီးကိုဆွဲကိုင်ပြီးဆောင့်ဆောင့်လိုးရာ ဖင်သားဆိုင်ကြီးမှာတအိအိလှုပ်ခါလျက်မြင့်အောင်၏ဆီးခုံနှင့်ရိုက်သံမှာ အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။မြင့်အောင်လည်းအားရကျေနပ်သည်အထိဆောင့်ဆောင့်လိုးလျက်ရှိရာ ပုံ့ပုံ့မှာကော့လန်သည်အထိပင်ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးလေသည်။ “အား…မြင့်အောင်…ငါမရတော့ဘူး….အရမ်းကောင်းလွန်းလို့….မရတော့ဘူး ငါပြီးတော့မယ်….” “အွန်း..ငါလည်းကောင်းတယ် နင့်ဆောက်ဖုတ်ကဆွဲဆွဲညှစ်နေတယ်”။
အီး….အမလေး…..အူး…ငါပြီးတော့မယ်..ငါပြီးရင်နင်လည်းပြီးလိုက်တော့…နားပြီးမှထပ်လိုးကြမယ်” “အင်း..အင်း…အာ့ဆိုငါ အမြန်ဆက်တိုင်ဆောင့်လိုးတော့မယ်” “အား..အား..အမလေး…. အူး….” မြင့်အောင်လည်းလီးအရင်းနားထိရောက်အောင်ပင်ဖိဖိပြီးဆောင့်လိုးပေးရင်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုပင်ဆင့်ကဲဆင့်ကဲဆောင့်လိုးပေးလိုက်ရာ…. “အ..အား…ငါပြီးပြီ….ငါပြီးပြီ….” “အွန်း..အွန်း…..အင်း…အား..ငါလည်းထွ့က်တော့မယ်…အ..အ…အ….. ဟူး”ဟူ၍မြင့်အောင်လည်းမြည်တမ်းရင်းမှ ပုံ့ပုံ့၏ဆောက်ဖုတ်အတွင်းမှလီးတံကြီးကိုဆတ်ခနဲချွတ်၍ပုံ့ပုံ့၏ဖင်လုံးကြီးကိုသုတ်ရည်တွေပတ်ခနဲပန်းထုတ်လိုက်သည်။
ဖင်လုံးအိအိကြီးပေါ်၌သုတ်ရည်တွေဖွေးခနဲဖြစ်သွားသည်။ပုံ့ပုံ့လည်းအထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းအရသာကိုခံစားနေလိုက်သည်မှာဖင်ကြီးထောင်နေတာကိုထောင်နေလျက်အတိုင်းပင်ရှိသေးသည်။မြင့်အောင်လည်းအမောပြေရေတစ်ခွက်သောက်လိုက်ရင်း “ငါ ထပ်လိုးဦးမယ်နော် နင်နာနေပြီလား” “နင်အမောပြေလို့ နင့်လီးပြန်တောင်လာပြီဆို ငါလည်းရယ်ဒီပဲ..ညနေအထိ နင့်လီးကိုငါအပိုင်သိမ်းမှာ…” “နင်စိတ်တိုင်းကျ ဒီကောင်ကြီးကရှယ်ပြုစုပါ့မယ်ဗျာ…..ဟဲ..ဟဲ…ဟဲ…” “သွား……လူဆိုး……ငလိုး…..ခစ်ခစ်..ခစ်”…..ပြီးပါပြီ။
Categorized as အင်းဆက် Tagged ရှယ်ပြုစုပါ့မယ်ဗျ